Caroline Day – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Equalizer2(2018) ကွန်မန်ဒိုဟောင်းရောဘတ် မက်ကောလ်ဟာ မက်ဆာချူး ဆက်မြို့ပြင်မှာ အိမ်ခန်းငှားနေ ရင်း Lyft ကုမ္ပဏီမှာ ဒရိုင်ဘာ လုပ်ပြီး ဘဝကို အေးအေးချမ်း ချမ်း ဖြတ်သန်းနေခဲ့ပါတယ်။မက် ကောလ်ရဲ့ကားကို ပုံမှန်စီးနေတဲ့ ဆမ်ရက်ဘင်စတိန်းက သူ့ညီမရဲ့ ပန်းချီကားကို လိုက်ရှာချင်တဲ့ အကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဆမ် က ဂျူးလူမျိုးတွေ အစုလိုက်၊ အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုကနေ လွတ်မြောက်လာသူဖြစ် ပြီးကွဲကွာနေ တဲ့ သူ့ညီမဖြစ်သူကို ရှာချင်နေ တာပါ။အဲဒါနဲ့ မက်ကောလ်ဟာ စီအိုင်အေက သူ့သူငယ်ချင်း ဆူ ဇန်ကို ပန်းချီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းပေးဖို့ အကူအညီတောင်းခဲ့ ပါတယ်။တစ်ရက်မှာတော့ ဘရပ် ဆဲလ်က တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာ လူ သေမှုဖြစ်တဲ့အတွက် စီအိုင်အေ က မက်ကောလ်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင် ဖက်ဟောင်း ဒေ့ဗ်နဲ့ ဆူဇန်တို့ သွားစုံစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီက နေ ဟိုတယ်အပြန်မှာတော့ ဆူဇန်ကို လူနှစ်ယောက်က ...
IMDB: 6.8/10 81,867 votes
I Feel Pretty (2018) ကွန်ဖီးဒန့်ရှိလို့ လှတာလား? လှလို့ ကွန်ဖီးဒန့်ရှိတာလား?ဒီဇာတ်ကားထဲက ရီနေးကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလှဘူးဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေသူပါအလှကုမ္ပဏီမှာ ကောင်တာထိုင်အလုပ်နေရာအတွက်လျှောက်ထားချင်သော်လည်းအလုပ်ခေါ်စာမှာ ကုမ္ပဏီရဲ့အလှမျက်နှာဖုံးဖြစ်ရမယ်ပါတော့လက်လျှော့ခဲ့တယ် တစ်နေ့တော့ ရေပန်းတစ်ခုမှာလှလာပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်တယ်နောက်နေ့မှာတော့ လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီးပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးနောက်မှာ ခေါင်းထိသွားတယ် ပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်က ဘာမှ မပြောင်းလဲသွားပေမယ့်သူကိုယ်သူ အလှကြီးလှတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ရသွားပါတယ်။ အဲ့စိတ်နဲ့ပဲ အလုပ်လျှောက်တော့ အလုပ်ရရည်းစားရ အဆင်ပြေခဲ့ပေမယ့်အရမ်းကွန်ဖီးဒန့်ရှိတဲ့မာန်မာနကြောင့်လူအများနဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်းဝေးကွာလာပါတော့တယ်။ဒီကွန်ဖီးဒန့်အပြည့်ရှိနေတဲ့ စိတ်က တစ်သက်ခံပါဦးမလား?လူတွေနဲ့ရော ပြန်အဆင်ပြေမလား?ကွန်ဖီးဒန့်က အရေးကြီးလား?လှဖို့က အရေးကြီးလား? ဘယ်အရာက အရေးကြီးမလဲဆိုတာ ရှုစားကြည့်ပါနော် Review Credit
IMDB: 5.4/10 35,330 votes